Ginny iyo Georgia - Sababta guusha weyn ee taxanaha Netflix | Bezzia
Susana godoy | 06/04/2021 14:00 | Wararka
Dhawr toddobaad ka hor, ayaa taxanaha 'Ginny iyo Georgia'. In kasta oo laga yaabo in markii hore aysan ku bilaaban mid ka mid ah kuwa ugu cadcad inay guul gaarto, haddana way leedahay. Waqti aad u yar gudahood ayay iska dhex dhigtay kuwa loogu daawashada badan yahay madasha.
Sidaa darteed, waxay leedahay burushyo badan oo ay noqdaan taxanahaaga cusub ee aad jeceshahay. Wali ma aragtay? Hadday sidaas tahay, markaa si fiican ayaad u ogaan doontaa waxaan ka hadlayo haddii kale, weli waad heli kartaa oo waad isku dayi kartaa. Qaab waalan oo loogu talagalay dhagarta laakiin leh jillaabyo badan oo isdaba socda.
1 Xiriirka ay hooyo aad u yar la leedahay carruurteeda
2 Sheekada ka dambeysa hooyo sir leh
3 Qaan-gaarnimada iyo dhibaatooyinkeeda
4 Xiriirka jacaylka ee 'Ginny iyo Georgia'
Xiriirka ay hooyo aad u yar la leedahay carruurteeda
Runtu waa tan xiriirka hooyada, Georgia, ay la leedahay caruurteeda waa wax ka boodaya jaleecada hore. Sida hooyo ama aabbe kasta, iyadu wax walba ayey siisaa laakiin waa run inay tallaabo dheeraad ah ka sii qaadayso. Sababtoo ah xiriirkaas asxaabta ah ee aan dhammaanteen ka rabno hooyooyinkeen ama gabdhaheenna, ayaa hadda umuuqda inuu nool yahay. Intaas waxaa sii dheer, mararka qaarkood go'aannada gabadha waxay si weyn u saameeyaan dadka waaweyn, marka ay caadi ahaan tahay wax iska soo horjeedda. Waxaan ka heli doonnaa xorriyaddaas guud marka loo eego saaxiibtinimada iyo xiriirka qoyska, wax aan jecel nahay inaan ka aragno qaybta ugu horreysa, in kasta oo intaas oo dhami ay sidoo kale horumari doonaan. Maaddaama xiriirkan ka dambeeya ay jiraan wax qarsoon oo mugdi ah oo murugsan.
Sheekada ka dambeysa hooyo sir leh
Wax walba waxay leeyihiin barta midowga sidaas darteedna, xiriirka hooyada iyo gabadha, sidoo kale. Tani waxay ka dhigan tahay in haddii xiriirku sidaas yahay, wuxuu noqon doonaa wax. Waxaa laga yaabaa sababta oo ah hooyadu waxay haysatay gabadheeda oo aad u yar, iyada oo loo marayo riwaayadaha qoysaska qaarkood oo iyada ku sii hagaajinaya. Sababta oo ah, marka gabadheeda Ginny ay ogaato waxa hooyadeed qarinayso, ma cafiyaan iyada ama sidaa ayaa muuqata. Laakiin waa run inay weli jiraan waxyaabo badan oo in la ogaado si loo fahmo. Sirta waxaa lagu muujin doonaa qaabka boodboodka waqtiga. Markaa sidan, waxaan u fahmi karnaa doodda lafteeda si aad u wanaagsan.
Qaan-gaarnimada iyo dhibaatooyinkeeda
Sirta ka sokow iyo xiriirka ka dhexeeya hooyada iyo gabadha, taxanaha Netflix 'Ginny iyo Georgia' waxaa sidoo kale ku jira riwaayado dhallinyaro ah. Cilaaqaadka ugu horeeya ee galmada, jaceylka imaada ama taga iyo sidoo kale qiimaha saaxiibtinimada iyo cilladaha qaarkood. Waxay umuuqataa in xifaaltanka iyo bisaylku ay sidoo kale gebi ahaanba iskudhacayaan taxane sidan ah. Marka mudnaan ahaan si wanaagsan ayaa looga hadli karaa taxane dhalinyaro ah, in kasta oo xilligan la joogo uu daboolayo wax ka badan intii aan qiyaasi lahayn Waxaa jira hadallo la mid ah mid kale oo taxane ah oo in yar ka hor guulo waaweyn oo aan cid kale ahayn ahayn 'Gilmore Girls'.
Xiriirka jacaylka ee 'Ginny iyo Georgia'
Sababtoo ah maahan inay wax walba riwaayad ku noqon doonaan 'Ginny iyo Georgia', waxay sidoo kale leedahay taabasho majaajillo ah iyo sidoo kale mowduucyo jacayl. Wax iskudhaf ah oo udhaxeeya hooyada iyo gabadheeda, mid walbana mustaqbal aan la hubin. In kasta oo ay run tahay in mararka qaarkood aan weydiisan karno in gabadhu ay aad uga bisil tahay hooyada. Ku dhaca jacaylka iyo sidoo kale xidhiidhada galmada ugu horreeya ayaa ka mid ah qodobbada muhiimka ah. Mawduucyada lagu ciyaaro dabeecadda guud taas oo naga caawinaysa inaan fahamno dabeecad kasta in yar oo dheeraad ah. Markaa ka dib markii aad ku raaxeysatey xilli ciyaareedkii ugu horreeyey, su'aasha qof walba weydiiyo waa: Netflix ma cusboonaysiin doontaa 'Ginny iyo Georgia' xilli ciyaareed labaad? Waan hubaa in guusha ay heysato, aan dhowaan ogaan doonno wax wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Sababta guusha taxanaha 'Ginny iyo Georgia' ee Netflix